Dowladda Mareykanka Oo Markale Digniin Kasoo Saartay Dagaalka Ka Socda Wadanka Itoobiya.
Tuesday September 19, 2017 - 19:30:46 in Wararka by Super Admin
Qaar katirsan dowladaha Reergalbeedka ayaa markale ka dardaar warinaya xaaladda adag ee kajirta wadanka Itoobiya oo kamid ah wadamada dhaca Bariga qaaradda Afrika.
Dagaalka Itoobiya ayaa dhaliyay khasaara malaayiin dollar ah
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in xaalad murugsan ay kajirto gudaha wadanka Itoobiya islamarkaana dowladdu ay ku guuldarreysatay joojinta dagaallada kusii fidiya gobollada Oromia iyo soomaligalbeed.
War qoraal ah oo kasoo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa lagu sheegay in iska hor’imaadyada ka socda xuduudda ay wadaagaan gobollada soomaalida iyo Oromada ay xaaladda ammaan ee wadanka sii xumeeyeen.
Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in dad ka badan 50 qof lagu dilay rabshado ka dhacay duleedka magaalada Harar, xukuumadda Washington ayaa horay u sheegtay in dagaalka ka socda Itoobiya uu cawaaqib xun keeni doono haddii aan wadahadal lala furin kooxaha mucaaradka ah.
R/wasaaraha Itoobiya ayaa maalin ka hor dhaleeceeyay iska hor’imaadyada u dhaxeeya qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida halka kooxaha mucaaradka ay rabshadahan ku eedeeyeen in ay soo maleegtay xukuumadda Addis Ababa oo isku dayaysa in maleeshiyaadka Liyuu Booliska ku damiso kacdoonka shacbiga ah.
Weerar Ka Dhacay Saldhig Ciidamada Dowladda Ku leeyihiin Huriwaa.